Thursday April 02, 2020 - 19:34:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya dagaallo lagu hoobtay oo maleeshiyo beeleedyo hubaysan ku dhaxmaray deegaanno hoos taga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ka imaanaya deegaannada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ugu yaraan 28 qof oo ubadan dhinacyadii dagaallamay iyo dad shacab ah ay dhinteen halka kontomeeyo kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Dagaalladan waxay dhaxmarayaan laba beel oo walaalo ah balse waxaa hubka isugu dhiibaya mas'uuliyiin katirsan maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay Jubbaland kaas oo u adeega gumeystaha Kenya.
Ilo wareedyo aan ka helnay deegaannada lagu dagaallamayo ayaa sheegaya in dagaallada ay gadaal ka kala hurinayaan laba nin oo lagu magacaabo Max'med Warsame Darwiish iyo Iftiix Xasan Baasto oo labaduba kamid ah mas'uuliyiinta maamulka 'Jubbaland'.
Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda beelaha walaalaha ah ee dagaallamaya ayaa sheegay in markii xal laga gaaray colaadda labada dhinac u dhaxaysa ay dagaalka dib uhuriyeen maleeshiyaad lagasoo hubeeyay Kismaayo arrinkaas oo wiiqay dadaalladii nabadda.
Maleeshiyaadka hubaysan ayaa si bareer ah udilaya dad xoola dhaqata ah oo aan dagaalka ku lug laheyn, meelaha qaar waxaa lagasoo sheegayaa in maleeshiyaadku ay dilayaan haweenka iyo carruurta.
Max'med Warsame Darwiish iyo Iftiix Xasan Baasto ayaa saanado hub ah udaabulaya deegaanka dhanka galbeed uga beegan Kismaayo, dhowaan ayay wilaayada Islaamiga Jubbooyinka heshiis dhax dhigtay maleeshiyaadkan dagaallamaya waxaana xal laga gaaray dhul lagu murmay balse cadowga oo umuuqda in ay dhibtay nabadda walaalaha ladhax dhigay ayaa colaaddii dib kasii hurinaya.
Waxaa xusid mudan in deegaannada hadda lagu dagaallamayo ay kaabiga ku hayaan Kismaayo waxaana ka arrimiya maamulka Jubbaland kaas oo mas'uul ka ah dhiigga daadanaya, intabadan deegaannada ay haystaan ciidamada shisheeye waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo dad badan ay ku hoobteen.